Qingdao Haokun Heavy Imishini Technology Co., Ltd yinkampani nesebenzisa design, ukukhiqiza kanye ekupheleni kwemishini for yokusansimbi, steel elendlalekile, izimayini kanye nokuvikelwa kwemvelo. Imikhiqizo eziyinhloko zihlanganisa Straight Seam zokushisela Pipe Mill (noma ERW), Kuvunguza zokushisela Pipe Mill, longitudinal Shearing Production Line, Edge Milling Machine kanye nezinye imishini elisizayo, ezifana Hydrostatic Testing Machine kanye Pipe Iphela Beveling Machine.
Le nkampani elise ebabazekayo Jiulong Idolobha Industrial Park Jiaozhou eMzini Qingdao eSifundazweni Shandong, China, okuyinto ilitje HuangDao Container Terminal, umfundisi omkhulu kunabo Container Terminal e Northern China. I zokuthutha esikahle kuletha isimo evumayo kakhulu nokukhishwa ogandaganda abakhulu. Ngaphezu kwalokho, imboni eyakhelene eziningi zokuxhumana onguthelawayeka, nge Jiaozhouwan Highway eningizimu, okuyinto ngokungangabazeki kuletha imishini ezinkulu zokuthutha lula kokubili amaklayenti ezifuywayo kwezilwandle.
Eyokuqala-qophelo ukwakhiwa plant kuthatha indawo mayelana 43900 square metres, onamafa ingqikithi 89million Yuan (azungeze 13million USD). Inkampani ungumnikazi ochwepheshe phezulu keme e China ekukhiqizeni umugqa ipayipi, abaklami kakhulu nokuphathwa amathalenta, 136 mechanicians futhi 39 ochwepheshe level Lesisemkhatsini nangaphezulu. Ekupheleni kuka-2009, Haokun uyothatha omunye 60000 metres square wecebo yayo yesibili yomsebenzi wokwakha-esiteji njengoba isandiso, okubandakanya R & D Centre negenkle imigqa yokukhiqiza isitshalo. Ukufunda ukushayelwa okusuka kwezinye izinkampani, Saqhubeka innovating by sokulandela ukuthuthukiswa izinqubo ezithuthukisiwe futhi ubuchwepheshe kusukela izinkampani zakwamanye amazwe, futhi ehlelekile sihlaziye umkhuba ezibalulekile yasekhaya. Kuze kube manje eziningi amaklayenti kwezilwandle usukhokhe ukuvakasha on-site ucwaningo, utshalomali nokubambisana.
Phakathi kusukela ukusungulwa kwenkampani eminyakeni eyedlule, uye yanikezwa Zhejiang Huzhou Jiuli Group, Baoji Petroleum Steel Pipe Co., Ltd, Shanghai BSW Petro-Pipe Co., Ltd futhi Singapore Fengyu Private Company, nge Hydrotester 1200 ton, 2000 ton futhi 2800 ton ngokulandelana, futhi Pipe Uphela Beveling Machines ka Φ1620mm, Φ820mm, Φ2540mm, nge Ukucaciswa ahlukahlukene. Esikhathini esifanayo kwesikhathi, eziningana ephezulu grade steel nezinkulu ubukhulu Welding-ipayipi Izigayo zazakhiwa bafakwa operation, phakathi okwakukhona ERW24 amabili '' iqonde umphetho Welding ipayipi Izigayo ne ubukhulu ngobukhulu e China ezindlini Liaoyang Esibanzi Pipe Inkampani futhi Guangzhou Juyi Steel Pipe Co., Ltd; ezintathu Kuvunguza zokushisela Pipe Mills nge okusezingeni eliphezulu yensimbi ebangeni X80 andΦ1422mm ngoba Yangzhou Tongya Steel Pipe Cp., Ltd futhi Petroliam Nasional Berhad (Petronas). Kuze kube manje amayunithi ngenhla ezinhlanu baye kuleveli ehamba phambili lapha ekhaya nasemaveni eningizimu nasentshonalanga ye-Asia.
Haokun Inkampani uye njalo aphethwe ifilosofi zebhizinisi "Quality Okokuqala, Ukulandela inkontileka, Orientation Customer Service Ovelele" nangenhliziyo yonke elinikeza amaklayenti ezifuywayo kwezilwandle namasevisi ezifana amakhambi ezinkinga-kanzima nut isayensi nobuchwepheshe, design zahlanganiswa, ukucutshungulwa nokukhiqiza, ukufakwa nokuhlolwa, kobuchwepheshe kanye Consulting zobuchwepheshe, ezindaweni yokusansimbi, steel elendlalekile, izimayini kanye nokuvikelwa kwemvelo. Haokun Inkampani ubulokhu iyohlale uzibophezele ngokwezifiso, amazwe kanye nokusimama kakhulu abakhiqizi Welding ipayipi. Inhloso yethu eyinhloko ngowokuqala uqimba ibhizinisi!